Maskaxdaada on Porn -
Fiidiyowyo & Maqaallo
Runtii ku saabsan cilmi-baarista ugu dambeysa ee saameynta porn-ka internetka?
Walaaca ku saabsan cillad galmo? Kicinta alaab aad u daran? Rabitaan hoose oo jinsi wadaag ah? Walaaca bulshada, Dhibaatooyinka garashada, la'aanta dhiirigelinta?
Waxaad joogtaa goobta saxda ah.
Macluumaad dheeraad ah Tarjumidda
Taas macnaheedu waa KHAYRAADKA
Fiiri liistada cilmi-baarista ee ku habboon iyo sharaxaadda sayniska aasaasiga ah.
Cilmi-baaris La Xiriira
Uruurinta daraasadaha taageeraya sheegashooyinka laga sameeyay boggan waxaa laga heli karaa halkaan. Sidoo kale, naceybyada daraasadaha iyo qoraallada marin habaabinta.
Evolution ma u diyaargaroobin maskaxdaada porno maanta. Akhri qoraalka fikradaha muhiimka ah ee sayniska oo ku qoran sheeko sahlan oo la fahmi karo.
Hadalka TEDx ee Gary Wilson
Fiiri xariirkaaga Maskaxdaada ku saabsan feedhada wararka Porn, taas oo ay ku jiraan sheekooyin soo kabashada cusub.
Miyaad leedahay Cillad Galmada oo Porn-ku Kacday? Qaado Kediskaan
Noloshayda galmoodka ayaa si weyn u soo hagaagtay
Dareenka guskaygu wuu soo hagaagayaa
Noloshu aad ayay u farxad badan tahay ka dib markii ay bil gudaheed aadey bilaa lulataaye
WAXBARASHADA: Miyuu isticmaalka sawir -gacmeedka qaawan ee internetka ku xiran yahay cillad galmo aan toos ahayn oo ragga dhallinyarada ah? Falanqeyn kala duwan oo ku saleysan sahan ku saleysan shabakad caalami ah (2021)
Da'da 18 - Dheddig - Faa'iidooyinka joojinta lulataaye
Da'da 25 - Laga bilaabo kacsi la'aanta si aad ugu adkaysato galmada ka dib
Guulaha sharciga ah ee ka soo gaadhay dhibaataynta / sumcad xumida Nicole Prause: Iyadu waa dambiilaha, maaha dhibbanaha!
Da'da 16 - Dhibaato halis ah oo ku adkaata
Da'da-37: Hagaajinta libido
Qoraagii ugu iibinta badnaa ee Maskaxdaada ee Porn, Gary Wilson, ayaa geeriyooday.
Da'da 41 - Galmadu aad bay u raaxaysan tahay mana daahayn shahwada
Dib u soo noqoshada Nation Forum
"Dib -u -bilaabid" waa nasasho dhammaystiran oo ka timaadda kicinta galmada macmalka ah, oo ay ku jiraan lulataanta internetka. Maskaxdaada dib u fur dhiiri galin iyo waxbarasho at RebootNation.org
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu noolaato si xor ah lulataaye mar labaadna ugu raaxayso galmada
Koorsooyinka fiidiyowga ee tooska ah ee kugu hagaya tallaabo-tallaabo si aad u joojiso adeegsiga qaawan ee qasabka ah oo aad dib ugu noqoto cilladaha galmada ee sababa galmada, ee Kaniisadda Noah BE. Wax dheeri ah baro
Waqti si aad u hesho dhab ah oo ku saabsan pornography internetka
Maskaxdaada on Porn waa la heli karaa maqalka, ebook, iyo waraaqaha ka $ 5.99. Tarjumaadyo badan ayaa la heli karaa.
iibso Hadda Tarjumidda
"Waxa dhibka leh ayaa ah marka dhalinyaradu ay wax ku bartaan galmada iyaga oo isticmaalaya porno oo ay u maleynayaan in rabshaddu ay tahay qayb caadi ah oo ka mid ah ... t.co/eOxtb92QFS
Ka qayb gal waddanka dib loo bilaabo
A "reboot" waa nasasho dhamaystiran oo ka yimaada dhiirigelinta galmada ee farsamada, oo ay ku jiraan porno internetka. Maskaxdaada dib u soo kabashada adoo dhiirigeliya iyo waxbarashada
Ku biir RN
Soo-koobidda Muhiimadda Muhiimka ah
Maskaxdaada on Book of Porn
Bogga Weyn & Su'aalaha La Weydiiyo
Dhibaato ku Saabsan Dhibaatooyinka Galmada Dhallinyarada ah
Khubarada Aqoonsiga PIED
Waa kuwee Khubarada u sheega Kufsiyada PIED
Dib u soo noqoshada Qodobka
Qalabka Isbedelka & Soo kabashada
Ikhtiyaarrada Taageerada & Caawinta
Talobixin ka yimid Dib-u-hagaajiyeyaasha guuleysta
Dib u soo kabashada & Isticmaalka Porn-ka Su'aalaha
Dib u soo kabashada (dib u soo kabashada) isdifaac
Forumyada, Blogyada, Mawduucyada
Cilmi baarista ugu muhiimsan
Cilmi-baadhista Xuubka ee Dadka Waaweyn
Daraasado Su'aalo & Marin Habaabinaya
ICD-11: Dhibaatada Dabeecadda Isku-Dhaqanka ee Isku-tagga
Bulshada Maraykanka ee Daaweynta Maandooriyaha
VIDEOS & QODOBO
Mawduucyada Qaar kale